Peter Stern Anobatana neApple's Cloud Services Team | IPhone nhau
Peter Stern Anobatana neApple's Cloud Services Team
Apple iri kuramba ichiongorora vatungamiriri kune mamwe makambani vachitsvaga munhu anokwana zvinodiwa nekambani uye nezvirongwa zvaro zvemberi. Kusaina kwekupedzisira kwekambani yeCompertino-inonzi Peter Stern, uyo kusvika parizvino aishanda muTime Warner tambo yedanho. Paanobatana neApple, anozove taura zvakananga kuTunes CEO panguva ino Eddy Cue. Munguva yaakashanda achishanda paTime Warner Cable, Stern anga achibatanidzwa mukukurukurirana kwaive nekambani neApple nezve mukana wekuita chibvumirano neApple kuti vape pamwe terevhizheni sevhisi, kutaurirana uko sekuziva kwedu tese hakuna kusvika zvakanaka chiteshi.
Stern akasiya basa rake kuTime Warner tambo yematanho zvichitevera kuwanikwa kwayo kutanga gore rino naChrter Communications. Usati wasiya basa rako, Stern akaitisa epamusoro-chikamu chikamu chekambani kuvandudza uye zano mashandiro mukambani, kutarisira izvo zvakaitwa nekambani mumakore apfuura nguva zhinji.
Munguva pfupi yapfuura, Stern akabatsira kuita zano rakagadzirirwa kunatsiridza vatengi, iyo iyo Tambo Warner tambo yakakwanisa kukwezva nhamba hombe yevanyoreri mushure memakore akati wandei ekuderera.
Tichifunga nezve chiitiko chako muindasitiri yekambo, Stern inogona kubatsira Eddy Cue kutaurirana madhiri neterevhizheni network kana iyo kambani ichiri kufarira kuvhura terevhizheni sevhisi mune ramangwana. Asi Sezvakataurwa neThe Wall Street Journal, Stern achange achitarisira masevhisi egore ane hukama neTunes uye Apple Music mukuwedzera kune zvimwe zvigadzirwa, saka kusaina kwake hakuenderane nekwanisiro yekuda kwekambani kuisa musoro wayo mune rimwe dunhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Peter Stern Anobatana neApple's Cloud Services Team
Samsung inogona zvakare kubvisa 3.5mm chiteshi pane iyo Galaxy S8